भीमेश्वर मन्दीरकाे शिलामा आयो फेरि पसिना, मुलुकमा अशुभ हुने संकेत, बिगतमा के के भए ? « गोर्खाली खबर डटकम
अति नै मा,र्मिक कथा मन थामेर न,रोई पढ्नुहोला ! अरुलाई पनि पढ्ने मौ,का दिनुहोला
हेर्नुस्, नेपाली सेनाको यस्तो क:’ठोर….. ; जुन भिडियो अहिले संसारभरी भाइरल भइरहेको छ [भिडियो }
यी हुन् २० पटकसम्म शल्यक्रिया गरेर दुनियाँकै ठूलो ओठ बनाएकी युवती (फोटोफिचरसहित)
काठमाडौं, ९ मंसिर । दोलखाको भीमेश्वरको शिलामा पसिना आएको छ । सो मन्दीरमा पसिना आए मुलुकमा अशुभ हुने तथा नराम्रा घटनाहरु हुने धार्मिक मान्यताहरु रहेका छन् । यसअघि पनि शिलामा पसिना आउदा देशमा ठूला-ठूला क्षति भएका थिए ।
पछिल्लो पटक मंगलबार आज दिउँसो २ बजेदेखि भीमेश्वरको शिलामा निरन्तर पसिना आइरहेको मन्दीर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भरत श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले शिलामा पसिना आएको यो १८ औं पटक भएको बताउनुभयो ।
यसअघि शिलामा १७ औं पटक फागुन ८ मा आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि लगत्तै कोरोना महामारीका कारण देशभरी लकडाउन भएको थियो । २०६२\_०६३ को जनआन्दोलन अघि पनि शिलामा पसिना आउको थियो ।
त्यस्तै राजदरबार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि पनि पसिना आएको थियो । त्यस्तैगरि १९९० मा भूकम्प आउनुभन्दा अघि पनि शिलामा पसिना आएको बताइन्छ । मंगलबार पनि शिलाको दायाँ बायाँ दुवै भागबाट पसिना आइरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
लकडाउन पछि नियमित पूजाको लागि खोलिएको मन्दीर एकहप्ता पछि पुन बन्द गरिएको थियो । अहिले सर्वसाधारणका लागि बन्द रहेको छ । तर पसिना आउन थालेपछि चलन अनुसार मन्दीर व्यवस्थापन तथा गुठियारहरुले र स्थानीयले पूजा गरिरहेका छन् ।
पसिना आएपछि क्षमा पूजाको लागि शिलामा आएको पसिना पुछ्ने चलन छ । त्यहाँ पसिना पुछिएको रुवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहवरमा गृहमन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि राजाका पालामा पसिना आउँदा राजदरबाट क्षमा पूजाको लागि पञ्चवली पठाउने प्रचलन थियो ।
पैसा कमाउन नसकेर त’नावमा हुनुहुन्छ ? एक मुट्ठी चामलबाट यसरी पाउनुहोस् चमत्कारीक लाभ
नेहाका पूर्वप्रेमी भन्छन् ‘उनको आँशु’ले मलाई अझै पिरलिरहेको छ’ (हेर्नुहोस्)
सधै ८ सय मिटर अग्लो खतरनाक पहाड चढेर विद्यालय जान्छन् यी बालबालिका
युवतीको यस्तो अनौठो विज्ञापन गर्न थाले पछि, गर्भवति बनाउ–पैसा कमाउ
वास्तुशास्त्रः बेडरुममा रातो बेडसिट राख्नु हुँदैन, थाहा पाउनुहोस् अरु के के राख्नु हुँदैन
२ बर्ष अघि छोरिसंग बिहे, त्यसपछि सासुसँग फिदा भएपछि लिभइन टुगेदरमा थिए ज्वाइ सासु
युवककाे बाईकमा लिफ्ट मागेर हिँडेकी,यी नर्सकाे जीवनमा पत्याउनै मु’स्किल पर्ने घ’टना, !
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल शरीरभरी ट्याटु बनाएका यी ‘सिक्स प्याक’ पुरुष को हुन ? (तस्वीरसहित )
मृत्यु भयो भनिएको बेपत्ता छोरो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएर पारिवारिक पुर्नमिलनको यो क्षण
शाहरुख खानकी छोरीलाई ‘काली बोक्सी’, ‘काली बिराली’ भन्ने को हुन् ? छोरीका कारण तनावमा शाहरुख